Nezvedu - Toptag Technology Co, Ltd.
Shenzhen TopTag Technology Co, Ltd yakavambwa muna2008 nemahofisi makuru maviri ari muHong Kong neShenzhen, China. TopTag yakavambwa neboka revane shungu uye vanhu vekugadzira vane hupfumi hweRFID yekutengesa uye yekugadzira ruzivo.
TopTag inogadzira akasiyana siyana maRFID tag uye zvinyorwa zvine akasiyana maumbirwo uye zvigadzirwa. Mateki edu anotangira pane yakaderera frequency kuenda kuU Ultra-yakakwira frequency, ayo anoshandiswa zvakanyanya muNFC Munda, Kubhadharwa Kwenhare, Kuwana Kudzora, manejimendi cheni yekushandisa, manejimendi manejimendi, kuchengetedza & kugadzirisa zvinhu, manejimendi manejimendi uye zvichingodaro. Isu tinewo akakosha mitsara yeRFID inodzivirira zvigadzirwa zvinosanganisira RFID ichivharira kadhi mubati, makadhi anovhara eRFID, chiratidzo ichivharira homwe nezvimwe.
TopTag haisi chete inosanganisira R&D, kugadzira, kutengesa asiwo inopa technical technical service uye rutsigiro. Yakagadzirirwa sevhisi inowanikwa kune vatengi vedu kuti vagadzirise ma tag avo uye zvinyorwa maererano nebasa, chimiro uye zvinhu.
Simba Redu Rakakosha ndere
Tinogona kuita tag zvetsika zvakanyanya kuchinjika, uye dhizaini, chero huwandu kana chero saizi.
5 Professional Lines yekuona Yakakwira mhando, Huru Kugona uye ipfupi kutungamira nguva.
Shandisa zvizere zvakanakira mafekitori akasiyana kuti upe chakanakisa chigadzirwa pamutengo wakanakisa.
Professional Technician rutsigiro uye inoshanda zvakanyanya timu yekutengesa.
Kubudirira kweVatengi ndiko kubudirira kwedu, nekudaro basa rakanakisa revatengi.